ओलीले किन झपारे कृष्णगोपाललाई ? - Kantipath.com
ओलीले किन झपारे कृष्णगोपाललाई ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटीलाई छुटाउन पुगेका र आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्‍याएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको क्रियाकलापबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री श्रेष्ठले ठीक नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबाट आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ,’ कानुनमन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूलाई तपाईंले जे गर्नुभो, ठीक गर्नुभएन भन्नुभएको छ।’
एकातर्फ छुवाछुत हटाउन कानुन बनाउने, अर्कोतर्फ कार्यान्वयन नगर्ने व्यवहार ठीक नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको कानुनमन्त्रीले बताए। सम्बन्धित मन्त्रीले समेत गल्ती महसुस गरेको उनको भनाइ छ। जातका कारण डेरा नदिएको आरोपमा बबरमहलकी स्थानीय सरस्वती प्रधानलाई रुपा सुनारको उजुरीको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानलाई असार ९ गते थुनामुक्त गरेको थियो।
प्रधानलाई थुनामुक्त गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानलाई बा १ झ ८७६३ नम्बरको आफ्नै गाडीमा चढाएर प्रधानलाई बबरमहलस्थित उनकै घरमा लगेर छाडेका थिए। जातीय छुवाछुतको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छुटाउन सरकारी गाडीमै पुगेपछि मन्त्री श्रेष्ठको आलोचना भइरहेको छ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जवाफमा न्यायाधिशका प्रश्न माथि प्रश्न
Next Next post: नेप्से घट्दा लघुवित्त उपसमूहको शेयरमा आकर्षण